SAWIRRO: Safiirka UK ee soomaaliya oo Baydhabo kula kulmay musharixiinta. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTASAWIRRO: Safiirka UK ee soomaaliya oo Baydhabo kula kulmay musharixiinta.
SAWIRRO: Safiirka UK ee soomaaliya oo Baydhabo kula kulmay musharixiinta.
November 11, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on SAWIRRO: Safiirka UK ee soomaaliya oo Baydhabo kula kulmay musharixiinta.
Safiirka UK ee soomaaliya Davin Cocar ayaa kulan la qaatay guddoomiyaha baarlmaanka koonfur galbeed soomaaliya cabduqaadir shariif sheekhunaa maye iyaga oo kawada hadlay masuuliyiin doorashada koonfur galbeed soomaaliya ee la doonayo inay dhacdo 17 bishaan aynu ku guda jirno.
Ambassador Concar ayaa dalbaday in doorashada koonfur galbeed soomaaliya ay u dhacdo si cad oo lagu kalsoonaan karo islaamrkaana lasoo buuxiyo tirada ka maqan guddiga doorashada ee koonfur galbeed.
Sidoo kale safirika dowladda uk ayaa kulamo la yeeshay musharixiinta xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyagoona kawada hadlay sidii doorasho xor ah uga dhici laheyd Koonfur Galbeed, looga gudbi lahaa caqabadaha iminka hortaagan koonfur galbeed.
Musharaxiinta ayaa la sheegay inay dalbadeen in dib loo dhigo doorashada koonfur galbeed soomaaliya si loogu diyaar garoowo taa badalkeedane ay dhacdo doorashao lagu kalsoonaan karo.
2,170,826 total views, 9,807 views today
2,170,826 total views, 9,807 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
2,170,471 total views, 9,805 views today
2,170,471 total views, 9,805 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
2,170,474 total views, 9,805 views today
2,170,474 total views, 9,805 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
2,169,439 total views, 9,792 views today
2,169,439 total views, 9,792 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
2,169,381 total views, 9,792 views today
2,169,381 total views, 9,792 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]